Haylou GT2 Ntuziaka akwukwọ - Akwụkwọ ntuziaka +
Haylou GT2 Ntuziaka ntuziaka
Ihe sitefazlul October 24, 2020 December 4, 2020 Hapụ ikwu na Haylou GT2 Ntuziaka ntuziaka
Igwe nti ntị TWS BT
:Dị: Haylou GT2
2 Ihe dị na igbe
3 Etu ị ga-eyi
4 Etu esi akwụ ụgwọ
7 Ọnọdụ stereo
8 Ọnọdụ Mono
9 Jụọ Ikpe ahụ
11 Daily mmezi Factory
13 Ntọala orylọ Ọrụ
14 Ntinye ederede naanị site na nti ntị
15 Nsogbu ndị ọzọ n'ịgba ụgwọ
16 Aftersales & Nkwado
16.1 Akwụkwọ ntuziaka ndị metụtara ya
Ihe dị na igbe
Eartips * 3 ụzọ abụọ (nke etinyere etinyere etinyere etinyere), earbuds, okwu nkwụ ụgwọ, eriri USB, ntuziaka onye ọrụ.
Ntọala Nhazi (earbuds)
Ọrụ ọrụ: 10m (oghere oghere na-enweghị ihe mgbochi)
Ike batrị: 43mAh (otu earbud)
Oge nkwụ ụgwọ: ihe ruru. 2hr
Okwu oge: ihe ruru. 3.5hr
Oge njikere: ihe ruru. 150hr
Ntinye ntinye: 5V 100mA
Typedị batrị: li-ion
Ụdị Bluetooth: v5.0
Basic oke (odori ikpe)
Ntinye ntinye: 5V 500mA
Mmepụta oke: 5V 150mA
Oge njikere: ihe ruru. Ọnwa anọ
Battery ikike: 380mAh
Etu ị ga-eyi
Biko gbanwee Mic ka ọnụ gị iji nweta ọfụma ọkpụkpọ ka mma.
Etu esi akwụ ụgwọ
Maka oge izizi iji, biko wepu akwụkwọ mmado site na mgbe ahụ tinye elu ntị.
Bulie earbud si n'okwu ahụ mee ka ike gwụ ha. Ọ bụrụ na earbuds si na nke ahụ, jide MFB maka 1.5s iji mee ka ha nwee ike (LED na-enwu gbaa ọcha maka 1s).
Pop earbuds n'ime ikpe ka ike ha anya. Jide MFB maka 4.5 iji mee ka ha pụọ. (Ikanam na-acha uhie uhie maka 2s).
Nchekwa onwe: were earbuds abụọ site na ikpe ahụ, ha ga-akpaaka ike ma jikọta ibe ha na 3s. Mgbe LED na aka nri ntị na-acha ọcha nwayọ nwayọ, chọọ Haylou-GT2_R wee pịa na ekwentị iji jikọọ ntị abụọ ahụ na ekwentị.
Ọ bụrụ na earbuds ida jikọọ na ekwentị, biko gbapụta ha azụ n'ime ikpe ma megharịa usoro ndị dị n'elu.
Earbuds ga-akpakọrịta na ngwaọrụ ikpeazụ na ndekọ ndekọ njikọ, ọ bụrụ na ọ bụla. (A ga-arụ ọrụ ikike Bluetooth
Cheta na: Atọọla GT2 n'ụlọ nrụpụta tupu ebupu.
Ntuziaka aka: ike o earbuds wee jiri aka gị ike na ha. Earbuds ga-akpakọrịta na ibe ya mgbe ikanam na nti ntị ntị na-acha ọcha nwayọ nwayọ. Na ekwentị, chọọ GT2_R wee pịa jikọọ earbuds abụọ na ekwentị.
Nchekwa onwe Njikọ: weghachite ma obu nti na okwu ikpe. The ntị ga-akpaaka ike na ikanam ga-ahụ itabi ọcha ọcha nwayọọ nwayọọ. Na ekwentị, chọọ Haylou-GT2_R / L wee pịa jikọọ earbud na ekwentị.
Earbud ga-akpakọrịta na ngwaọrụ ikpeazụ na ndekọ ndekọ njikọ, ọ bụrụ na ọ bụla. (A ga-arụ ọrụ ikike Bluetooth).
Cheta na: Ọ ga-eri oge karịa maka ntị aka ekpe iji jikọọ ekwentị.
Ntuziaka aka: ike gbanyụọ earbuds wee jiri aka gị ike ma na earbud. Mgbe LED na earbud na-acha ọcha nwayọ nwayọ, chọọ Haylou-GT2_R / L wee pịa ekwentị iji jikọọ.
Jụọ Ikpe ahụ
Jụọ ikpe ahụ site na eriri USB. Ikanam ga-enwu gbaa siri ike red mgbe odori na-atụgharị o otu topping elu.
Daily mmezi Factory
Biko awadala na nti egusi. Ejila ha n'oge mmiri ozuzo. Ahapụla ha na igwe igwe ma ọ bụ ọnọdụ ndị ọzọ siri ike. Jiri akwa kpọrọ nkụ sachaa ha mgbe ha jesịrị ịchụso ogologo ndụ.
Biko kwue ngwaahịa a, ọ bụrụ na ejiribeghị ya izu abụọ.
Biko jiri chaja asambodo.
Ejirila ntị ntị ogologo oge iji chebe ntị gị.
Ejisila ntị ntị n'ọnọdụ ọ bụla nwere ihe egwu nwere ike ibute n'ihi itinye ha nwere ike belata nghọta gị na ụwa ọzọ.
Ntọala orylọ Ọrụ
Ọ bụrụ na ntị ntị anaghị arụ ọrụ nke ọma, biko rụtụ aka na usoro ndị a iji tọgharịa ụlọ ọrụ mmepụta ihe: wepu ntị ntị na ikpe ahụ. Ike o na ntị wee jide MFBs na ntị abụọ maka ihe dị ka afọ iri na ise (Ikanam ga-acha uhie uhie na ọcha ugboro atọ). Mgbe nke ahụ gasị, mee ka ha laghachi n’okwu ahụ. Hichapụ ndekọ Njikọ na ekwentị tupu hazie ọzọ pairing (All Njikọta ndia metụtara earbuds niile ga-ewepụ).
Ntinye ederede naanị site na nti ntị
Ọ bụ obere okwu. Biko tọgharịa igwe nti, wepu ndekọ njikọta na ekwentị gị ma jikọkwaa ntị na ekwentị gị.
Nsogbu ndị ọzọ n'ịgba ụgwọ
Ikanam na-enwu gbaa na-acha ọcha maka oge 1 mgbe a na-agbanye earbuds.
Ebu ikpe agaghị ana earbuds, ọ bụrụ na batrị ya. Ọkụ na-ebu ọkụ ga-agbanyụ ozugbo ejiri okwu ikpe ahụ. Ọ bụrụ na ị kwụnye ya ọzọ, ndị LED agaghị enye ọkwa ọ bụla, nke na-apụtaghị na ebubo ebubo ahụ.
Tupu i jiri ekweisi, biko gụọ akwụkwọ ntuziaka ahụ nke ọma ma debe ya maka nrụtụ aka n'ọdịnihu.
Ekweisi dị mkpa ka a chaji ya nke ọma tupu ojiji izizi
Ọ bụrụ na ekweisi ekweghị ahapụ ihe karịrị izu abụọ, biko fanye ya n'oge ụfọdụ.
Biko jiri chaja ndị nrụpụta ruru eru rụpụtara.
5 Ọ bụrụ na ekwentị gị agaghị enweta ekweisi ahụ, biko lelee ma ọ dị na ọnọdụ mmekọrịta; ma ọ bụrụ na ahapụghị njikọ ruo ogologo oge, ekweisi ga-apụ ụzọ abụọ, biko tinyegharịa ọnọdụ ahụ; fa usoro njehie nke ekwentị gị pụtara, reboot ya ma ọ bụrụ na usoro njehie nke isi na-aga, reboot ma ọ bụ tọgharịa ya.
Okwu: Suite 1303,1305 na 1306,13 / F, Okwu Nkebi nke 2 nke Gaosheng Tech Tower, Gaosheng Tech Park, No.5 Longiii Road, Zhouxi Community, Nancheng District, Dongguan City, Guangdong, China.
emeputa: Dongguan Liesheng Electronic CO., Ltd.
Ihe ojoo na ọdịnaya ha na ihe ahụ
Notes: Biko hazie iji oge kwesịrị ekwesị ka ntị gị nwere ike mebie site na iji ngwaọrụ ogologo oge.
Aftersales & Nkwado
Oge Akwụkwọ ikike:
Ọnwa iri na abụọ mgbe ịzụrụ (biko debe akwụkwọ azụmahịa gị nke ọma)
Ọ bụrụ na ọ bụla àgwà ntụpọ eme n'oge akwụkwọ ikike oge, biko na-anata na kọntaktị na gị nkesa maka aftersales ọrụ.
Followinggbaso ikpe ma ọ bụ mmebi ọ bụla / ntụpọ ndị na-esiteghị na mbipụta dị mma anaghị ekpuchi na akwụkwọ ikike ahụ.
Ọdịmma ma ọ bụ mmebi ọ bụla nke ọdachi ndị mere, voltage ma ọ bụ eziokwu gburugburu ebe obibi ndị ọzọ.
Mbupu ọ bụla na-enweghị ikike, mgbanwe ma ọ bụ mgbanwe nke akụkụ.
Ihe nbibi ọ bụla nke iji ngwaahịa a eme ihe na-ekwesịghị ekwesị gụnyere ịmịkọrọ, nsị, ịda n'ala, ịpịpịa ma ọ bụ ikpughe na ọnọdụ na-adịghị mma ma ọ bụ iru mmiri.
Haylou-GT2-Manual-Kachasị mmaKachasị PDF
Haylou-GT2-Ntuziaka-OriginalBudata site na ntaneetị
Ajụjụ gbasara akwụkwọ ntuziaka gị? Biputere na-ekwu!
Akwụkwọ ntuziaka ndị metụtara ya
Haylou T15 TWS BT Ntuziaka Onye Ntuziaka Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ Haylou T15 TWS BT ekweisi karịrịview Kedu ihe ...
Haylou T17 Ntuziaka ntuziaka NKWUKWU Ntuziaka Ezi ekweisi ekwe ntị: Haylou T17 karịrịview Kedu...
Haylou Smartwatch Ntuziaka ntuziaka Ejiri ntuziaka Haylou Smart Watchview Kedu ihe dị n'igbe ahụ ...
Haylou GT1 Pro TWS Ntuziaka Onye Ntuziaka Igwe eji eme ntị TWS ntuziaka Haylou GT1 Pro karịrịview Ihe dị ...
Haylou GT1 TWS BT Earphones Ntuziaka Akwụkwọ ntuziaka Haylou-GT1 TWS BT karịrịview Okwu ịgba ụgwọ Ihe dị ...
Haylou GT1 TWS Bluetooth Earbuds Ntuziaka ntuziaka Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ TWS BT EarphonesHaylou-GT1 Overview Okwu ịgba ụgwọ Ihe dị ...
Ihe sitefazlul October 24, 2020 December 4, 2020 Ihe naHaylouTags: GT2, Haylou, Igwe nti ntị TWS BT
Haylou T17 Ntuziaka ntuziaka
Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ Onn Soundbar
Akwụkwọ ntuziaka iRobot Roomba
Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ agụụ Neato ROBOT
ikan PT4500-SDI / PT4700-SDI Ntuziaka Onye ọrụ Teleprompter High Bright Beam Splitter.
T-Mobile P10000250 Tablet ntuziaka onye ọrụ
Neato botvac D7 jikọtara ntuziaka onye ọrụ
Richard on Mpow M12 Ezi Ikuku Earbuds Ntuziaka ntuziaka BH463A
Jim Kozak on JALL Anyanwụ Oti mkpu na ntuziaka ntuziaka ntuziaka
Robin on Ọ BESR Long IWU Ogologo Ntugharị Igwefoto KIt Ntuziaka Ndị Ọrụ
Becky on Mifo O5 Ntuziaka ntuziaka
Ken on Netgear Powerline 1000 / PL1000 Ethernet Adapter Ntuziaka ntuziaka
Akwụkwọ ntuziaka +, Nganga kwadoro site na WordPress.